Okuphelile ihlobo ... Umoya unjengegreyathi njengemvula yasekwindla. Uhlobo lwaqala ukulahlekelwa yimbala phambi kokulala ebusika. Kodwa zikhona iindlela ezili-1000 ezisebenzayo zokuzihlaziya kunye nokuqhaqha i-gray-routine - ingaba ngumculo, ukukrakra komntu othandekayo, indebe yekhofi eshushu, isambatho esitsha kunye neqela lezixhobo ezahlukeneyo, umzekelo, iiglavu ezipholileyo, isikhwama somkhwa, isambatho okanye ukuba. Namhlanje siza kuthetha ngeengqungquthela - yintoni na, yintoni ukugqoka ngayo, indlela yokugqoka ngayo, nokunye okuninzi!
Ipalette yinto eqhelekileyo yokufikelela kwintombi, eyinxantathu yecala elixelwe ukukhusela kwiqanda.
Inxalenye ethile yembali. Ngekhulu le-17, i-tippet yaqulunqwa ngu-princess waseJamani, owathi igama lakhe igama. Ekuqaleni, wayemelele iingubo zoboya. Kwaye kwithuba nje baqala ukwenza i-silk, i-lace, i-velvet, i-cotton njalonjalo. Ukongezelela ekukhuseleni ukusuka kubanda, kuyinto enhle yokufumana intombi ezinikela ngothando.
Kufanelekile ukuthetha amagama ambalwa malunga nokuba njani kunye nokubiwe awukwazi ukumbatha. Ngokuqhelekileyo wayeba phezu kwezigqoko okanye iimfesane ngeentambo ezinzulu, phezu kwengubo, iingubo zokugqoka imvula. Ukubeka ngaphezu kwebabiweyo kudlala kuyo - kuya kuba nzima ukujonga. Ukuba u mfutshane, eli fowuni liza kubonakala lenze linciphise.
1. Inqabana. Ukubopha i-tippet enegulaneli inokuthi ihlawulwe kabini, kwaye ingaphezu kwebhokisi. Kule nto kufuneka udibanise zombini izesekeli zokugqibela phambi kwakho, uze usasaze iiphelo kumahlombe akho, njengoko zenziwe kumfanekiso.
2. "Ijoka le-scarf". Sidibanisa iziphelo zentshontsho, kwaye siyibopha entanyeni, siyijike, size siphinde siyiphonse, njengokwenziwe kumfanekiso apha ngezantsi. Olu khetho luya kubonakala luhle kakhulu ngebhokethi yesikhumba, i-raincoat okanye ingubo.
3. Iintyatyambo. Siphendulela umgca webabi kwaye siyiqoke ngebheki. Isiphelo samahhala sebabi siphonswa phezu kwelinye icala kwaye sizinye nepini okanye i-brooch ehle.
4. Akukho mbonakaliso oza kukhangeleka phezu kwengubo, sigqoke iingubo kwindlela elandelayo: sibeka i-palatine kumahlombe, umgca ongakwesokudla ufutshane, kunye nekhohlo elisezantsi phambi kwethu, ngoko kwinqanaba lesifuba, ukuluguqula kwelinye icala, ulibeke kwicala elifanelekileyo, lidibanise ngakwesokudla. Ungalungisa zombini iipali ngepini okanye i-brooch.
5. Inketho elula kakhulu, kodwa inempumelelo kakhulu - i-node ngaphambili. Kubukeka buhle kakhulu kungekupheleni kwengubo, iingubo okanye iingubo, kodwa nangaphezulu kwengubo emnyama emnyama, njengemfanekiselo apha ngezantsi. Ukwenza oku, yilapho uphose i-palatine kumahlombe akho, yolule kwaye uyimbophe phambi kwakho. Kule meko, ukuphela kwe-accessory ingaba yeyiphi ubude.
6. Le nguqulo ingentla ifanelekile kwiimeko ezinjalo ezingaqondakaliyo, xa kubanda ngaphandle kwekhanda, kwaye kushushu. Gubungela intloko nge-palantine, sinciphisa ixesha elide, kunye nokuphosa okufutshane kumva, njengoko kwenziwe kumfanekiso. Olu khetho lunokuthi lugqithiswe kancinci - umda omde uphonswe emva, siwubophe intamo yethu size solule kwakhona phambi kwethu. Kule meko, i-accessory iya kubamba ngcono.
7. Indlela elula, kodwa esebenzayo, ifanelekile kwibabi ende. Siphonsa ngokuphantse i-stele entanyeni, yenze oku kwakhona kwaye ubophe iiphelo phambi kwakhe okanye kwicala.
8. Uphindwe kabini kwaye uyifungele entanyeni, ngoko, njengoko kuboniswe kwisithombe esingezansi, welula iindawo zomhlaba.
9. Olu khetho luhle kakhulu lukhangele kwintombazana encinane - siyiphosa ihlombe emagxeni, silungele, sigqoke ibhande elincinci.
10. Uhlobo oluthile lufana kakhulu nale ingentla. Siwubopha ngentambo yentamo, siyanciphisa imiphetho size sibeke ibhande kwisibini. Iintetho ezi-9 kunye ne-10 zifanelekile zombini iingubo (iigebengu, iinqwelo zemvula), kunye neengubo zokugqoka. Kodwa kuyafaneleka ukuba sicinge ukuba phezu kwengubo le ndlela izakuzaliswa ngokuzenzekelayo, ngoko kufanelekile kumfazi omncinci.
Nangona uncedo lwaloo nto yokufikelela encinci, unokudala isimo sengqondo kwaye unike umphumo othe ngqo kwiingubo ezingabizi. Iimarike inikeza iindidi ezininzi zezinto eziphathekayo kuzo zonke iinkozo kunye nekhredithi - umbala, umgangatho, izinto zokuvelisa, amaxabiso, ukuthunga nokunye okunjalo. Ngoko ke, kufuneka uhlale ukhetha izinto ezincinane kakhulu, kuba zivela ezintweni ezincinci ukuba ufumane umboniso womntu.
Luhlobo luni lwengubo yokukhetha umcimbi?
Indlela yokuchazela kumntwana oko kunzima
Umfazi wokuqala kaDmitry Tarasov wayevuyiswe ngokuqhawula umtshato wakhe eBuvoy
Iintyatyambo ngaphakathi kwekhaya lakho, imithetho yokuvisisana
I-Benatex yindlela yokukhulelwa engeyona ye-hormonal